| बसले बालिका मारेपछि चालकलाई भेरीमा बगाइयो
मेचीकाली : 2010-09-14 15:12:16
सुर्खेत, २९ भदौ
बसले बालिका किचेर मारेको भन्दै सल्यान र सुर्खेतको सीमाक्षेत्र सुर्खेतको गजौडा राकमका गाउँलेले चालकलाई कुटपिट गरी जिउँदै भेरी नदीमा बगाइदिएका छन् । सुर्खेत राकम–२ गजौडामा तीन वर्षीया बालिकालाई भेरी–राप्ती बस व्यवसायी समितिको बसले किचेपछि मृत्यु भएको थियो । बालिकाको मृत्युपछि आक्रोशित गाउँलेले ना३ख ६६५१ नम्बरका बसका चालक ओकिल बुढाथोकीलाई कुटपिट गरी भेरी नदीमा बगाएको बस व्यवसायी समिति सल्लीबजारले जनाएको छ ।
आइतबार साँझ घाइते अवस्थामा भेरीमा फालिएका चालक बुढाथोकीको मृत्यु भइसकेको आशङ्का प्रहरीले गरे पनि अवस्था अझै अज्ञात छ । चालकको खोजीका लागि सल्यान र सुर्खेतका प्रहरी र स्थानीयबासिन्दाले दुई दिनदेखि खोजी जारी राखे पनि साँझसम्म कुनै पत्तो लागेको छैन ।
गजौडामा बस रोकिराखेको अवस्थामा बालिका बसमुनि पसेको थाहा नपाई गाडी चलाउन खोज्दा बालिकाको किचिएर मृत्यु भएको थियो । बालिकाको मृत्यु भएलगत्तै गाउँलेले गाडीका सबै स्टाफलाई कुटपिट गर्न थालेपछि सहचालक र कन्डक्टरले भने भागेर ज्यान जोगाएका थिए ।
१० लाख क्षतिपूर्तिको माग गर्दै गजौडाका स्थानीयबासिन्दाले बालिकाको शव साँझसम्म उठाएका छैनन् । दुई पक्षबीच विवाद मिलाउनका लागि दुवैतिरका प्रहरी लागे पनि विवाद साम्य भने हुन सकेको छैन ।
यसैबीच, ड्राइभरलाई बेपत्ता बनाएको भन्दै यातायात मजदुरहरुले छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्डमा यातायात बन्द गरेका छन् । बन्दका कारण सुर्खेत–सल्लीबजार–नेपालगन्ज चल्ने सवारी साधनहरु पूर्णरुपमा बन्द हुँदा सयाँै यात्रु बीच बाटोमै अलपत्रमा परेका छन् ।
Dhurba Prasad Sapkota:Sep 19, 2010 09:47:50 AM
Kameshwor Kamati जी यदि तपाई पनि पछि driver ओर आफ्नै गाडी भयो भने यस्तो accident गर्नु भयो भने अने तपाइलाई पने यसैगरी नदि मा हाल्दा कस्तो हुन्छ के सब समय driver को मात्र गल्ति हुन्छ र म पनि driver त होइन तैपने driver को व्यथा था छ....................
Razaram Shrestha :Sep 16, 2010 02:07:34 PM
कानुन छ, कम्तिमा मनबता त hunu पर्योनी मच्छेलै जिउदै खोलामा बगाउने क्रुर कम चाही ठिक लागेन.
kameshwor kamati:Sep 16, 2010 01:34:52 PM
आजकल का driver हरु कुकुर जस्ता छन् बरु
कुकुर उनीहरु भन्दा विद्वान छ । कुकुरले कम से कम आफ्नो मालिक लाई त चिन्छ\_' तर आजकलका driver ले मान्छे लाई चिन्दैन ।आजकलका driver हरु कुकुर भन्दा पनि खतम छन् ।जे गर्यो राम्रो गर्यो खुशी लग्यो । धनेबाद ती गाउलेलाई
subash:Sep 15, 2010 10:14:53 AM
मानिस किन त्यति सारो क्रुर भएका होलान !? मृत्यु को बदला मा फेरी पनि मृत्यु पनि कुनै न्याय हुन्छा र?